तपाईलाई थाहा छ, पुरुष केका लागि जान्छन् बेश्यासंग? यस्तो रहेछ रहस्य | Rajmarga
तपाईलाई थाहा छ, पुरुष केका लागि जान्छन् बेश्यासंग? यस्तो रहेछ रहस्य
लण्डन । पुरुष किन बेश्याकोमा धाउने गर्दछन् ? यसको उत्तर थाहा पाउन इन्टरनेशनल युथका मनोबैज्ञानिकहरुले गरेको अध्ययनमा रोचक तथ्य फेला परेको छ। यसको कारण पत्ता लगाउनका लागि देशका ७ सय मानिसलाई सहभागी गराइएको थियो । उनीहरुलाई कैयौ प्रकारका प्रश्न सोधियो, जसबाट कैयौ रहस्यबाट पर्दा हट्यो ।
अध्ययनमा भाग लिएका एक व्यक्तिले बताए कि पैसा खर्च गरेर प्राप्त गरिने यो सुख त्योभन्दा कैयौ बढी हुन्छ कि जुन व्यक्ति लुकीछिपी बाथरुपमा लिने कोशिस गर्दछ । मलाई यथार्थमा युवतीहरुप्रति दया जाग्छ तर यो एउटा यस्तो वस्तु हो जुन आफ्नोतर्फ हामीलाई खिच्ने गर्दछ ।
दोस्रो एक व्यक्तिले भने पुरुष पैसा खर्च गरेर बेश्याका साथ यस कारण जान्छन कि बेश्यासंग उस जेसुकै गर्न सक्दछ । जबकि केही चिज उ आफ्नो श्रीमतिसंग गर्न सक्दैन । अर्काले बताएअनुसार बेश्याकोमा जाउ, पैसा फ्याक र तत्काल जुन सुख प्राप्त गर । सर्भेमा अधिकांशले सेक्सको भोक मेटाउनका लागि उनीहरु बेश्याकोमा जान मन पराउने गरेको बताए ।
सर्भेमा भाग लिइरहेका २० प्रतिशतले आफ्नो वर्तमान सम्बन्धबाट खुसी नभएर बेश्याकोमा जान रुचाएको बताए । जबकि १५ प्रतिशतले विवाहको बन्धनमा नबांधिने भएकाले उनीहरु बेश्याकोमा जाने गरेका थिए । त्यस्तै ३ प्रतिशतले मानिस सेक्स र रुक्सीको लतमा बेश्याकोमा जाने गरेको बताए।
Previous post: २ वर्षको करार सम्झौतामा साउदी पुगेका ७ जना नेपाली युवा अलपत्र
Next post: कस्ले र किन ग-यो? एकै घरका दुई नाबालकको हत्या